मन्त्रीलाई समेत सक्रमण भएको डेंगु लागेमा के गर्ने? के नगर्ने? अनि कसरी बस्ने? डाक्टरको सुझाव | suryakhabar.com
Home पत्रपत्रिका मन्त्रीलाई समेत सक्रमण भएको डेंगु लागेमा के गर्ने? के नगर्ने? अनि कसरी बस्ने? डाक्टरको सुझाव
on: २१ भाद्र २०७६, शनिबार ११:३७ In: पत्रपत्रिका, स्वास्थ्यTags: No Comments
काठमाण्डौ । देशभर डेंगु महामारीको रुपमा फैलिइसकेको छ । धेरै जिल्लाहरुमा डेगु रोको हिसावले महामारी क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ । इटहरीमा पनि डेंगुको संक्रमण दिन दिनै बढिरहेको छ । पछिल्लो समय कृषिमन्त्तीलाई समेत यो रोगले संक्रमण गरेको छ । उनी काठमाण्डौको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर, सुनसरी लगायत देशभरका बिभिन्न अस्पतालमा डेंगु संक्रमित बिरामी छन् । यो बाहेक घर घरमा डेंगु सक्रमित बिरामी छन् । यो संक्रमण नियन्त्रणमा आउन अझै समय लाग्नसक्छ।
२ प्रसस्त झोलिलो खानेकुरा खाने । कम्तीमा एक जना वयस्कले पाँच चिया गिलास भन्दा बढी पिउने जस्तै: दूध, फलफूलको जुस, जीवनजल, सुप आदि।
३ एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग जताभावी नगर्ने, चिकित्सकको परामर्श बिना प्रयोग नगर्ने।
स्वास्थय खबर पत्रीका
२१ भाद्र २०७६, शनिबार ११:३७